Mai: 36 qof oo kali ah ayaa Norway iska soo dhiibay. - NorSom News
Mai: 36 qof oo kali ah ayaa Norway iska soo dhiibay.
Sida ay qortay wakaalada wararka NTB oo soo xiganeyso Tirokoob ay soo saartay hey´adda UDI, waxaa bishii na dhaaftay ee Mai, Norway iska soo dhiibay oo magangalyo soo codsaday ilaa 36 qof. Tiradaas oo le´eg tirada bishii hore ee April.
Isku dar waxaa Norway shantii bilood ee ugu horeeyay sanadkan magangalyo soo weydiistay 573 qof, tiradaas oo 200 qof kayar tirada sanadkii hore.
Sadex meelood meel dadka Norway iska soo dhiibo, ayaa ka imaada wadanka Siiriya, waxaana soo weheliya Turkiga iyo Ereteriya.
Xigasho/kilde: 36 personer søkte asyl i mai
Previous articleErna Solberg: Dhibaatadii Korona-virus, waxaa nooga daran oo badashay dhibaatadan kale.
Next articleUDI: Qoxooti ayaan Video-live ku wareysan doonaa.